खुसी हराएका र पीडा बिर्सिएकाको नाममा
अभय पाण्डे काठमाडाैं, १४ चैत
मोटरसाइकल बन्द । गाडी बन्द । हवाईजहाज बन्द । सेयरबजार बन्द । सिनेमा हल बन्द । रङ्गशाला बन्द । नाचगान बन्द । युवायुवतीको डेटिङ बन्द ।
लिस्ट लामो छ । संक्षेपमा भन्दा हामी जेलाई वैज्ञानिक र साँस्कृतिक विकासका प्रतीक मान्छौँ, ती सबै आज बन्द छन् ।
कहिले खुल्ने थाहा छैन । त्यो एउटा फिस्टे किटाणुको हर्कतले बताउनेछ । यत्रो विकासका बाबजुद हामी अहिले आफ्नो घरमा बन्द छौँ, कारण नोवल कोरोना भाइरस ।
यो भाइरसले एक मानिसबाट अर्को मानिसमा छलाङ लगाउने क्षमतामा अलिकति विकास गरेको भए आज हामी आफ्नो घरभित्र पनि सुरक्षित हुने थिएनौँ । छिमेकीले हाछ्यूँ गर्दा, हाम्रो घरसम्म आइपुग्ने थियो ।
हामीसँग कोरोना भाइरसको औषधि छैन । हामीसँग अधिकांश भाइरसको औषधि नै छैन । जुन खोपको हामी पर्खाइमा छौँ, त्यसले भाइरस मार्ने छैन, केवल भाइरससँग लड्न हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालार्ई मद्दत मात्र गर्नेछ ।
अहिले तपाईं पढ्दै हुनुहुन्छ । यी लेखिएका अक्षर बुझ्न चेतनाको आवश्यकता पर्दछ । तर, तपाईंको मस्तिष्कमा चेतना कसरी उत्पन्न हुन्छ ? विज्ञानलाई समेत यकिनका साथ थाहा छैन ।
‘कन्सस्नस’ भन्ने विषय वैज्ञानिकका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ । तपाईंले यो पढ्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यो निर्णय स्वतन्त्र थियो वा तपाईं आफ्नो अवचेतन मनमा रहेका कारणहरूले यो लेख पढ्न बाध्य हुनुभयो ?
यो मुक्त इच्छा (फ्री विल) को प्रश्न हो, जसलाई अहिलेसम्म विज्ञानले हल गर्न सकेको छैन । कतिपय वैज्ञानिक मान्छन् कि धर्मजस्तै विज्ञान अहिले आफैँ हठधर्मिताको शिकार बन्दै छ ।
विज्ञानले गरेका अनेकौँ विकासका बाबजुद यसका सीमितता छन् । यसले पत्ता लगाउन सक्ने कुरा र यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा । उदाहरणका लागिः यसले के, कसरी, कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ । तर, सबै किन को उत्तरचाहिँ दिँदैन ।
यसले ब्रह्माण्ड के हो ? यसको उत्पत्ति कसरी भयो र कहिले भयो भन्ने उत्तर त देला तर किन र कुन उद्देश्यका लागि भयो ? त्योचाहिँ भन्दैन ।
सही हो वा गलत ? यो छुट्याउनु पनि विज्ञानको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । त्यो नैतिकताको विषय हो । यद्यपि साम हेरिसजस्ता वैज्ञानिक विज्ञानले नैतिकताको बोझ पनि उठाउन सक्ने वकालत गर्दै आएका छन् ।
मानिस त लाखौँ वर्षदेखि विनाविज्ञान बाँचेकै हो । जनावरहरू अहिले पनि विनाविज्ञान बाँच्न सक्छन् । उनीहरू विलुप्त हुने कारण विज्ञानको अज्ञानता होइन, मानिसको क्रियाकलाप हो ।
तर, जतिसुकै सीमितता भए पनि अहिलेको युगमा हामी विज्ञानलाई नजरअन्दाज गरेर बाँच्न सक्दैनौँ । यही हाम्रो कटु सत्य हो । विज्ञानले आश्चर्यजनक रूपमा प्रगति गरेको छ ।
मानव जातीले जति समस्या निम्त्याउँछ, त्यसको समाधान विज्ञानले गर्दै आएको छ । मानव प्रगति पनि मूलतः यही नै हो ।
आफूले जानीजानी वा अन्जानमा निम्त्याएको समस्याको समाधानलाई शायद हामी प्रगतिको नाम दिन्छाैं । कतिपय वैज्ञानिक प्रगति हाम्रो जिज्ञासा मेटाउन पनि भएका छन् । जस्तो अन्तरिक्ष यान वा खोज । तर, हाम्रो दैनिक जीवन वा समस्याहरूसँग यिनको कुनै नाता छैन ।
आज हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट उन्मुक्ति पाउन विज्ञानले खोप पत्ता लगाउँछ भनेर आस गरेर बसेका छाैँ । यो महामारी मानिसले नै निम्त्याएको समस्या हो । तसर्थ, खोप प्रगतिको प्रतीक होइन । यो हामीले निम्त्याएको समस्याको निदान मात्र हो ।
अलिकति इतिहास कोट्याऊँ । करिब १० हजार वर्षअघि हामीले वनस्पतिको घरेलुकरण गर्‍याैँ । युवाल नोहा हरारीको भनाइमा हामीले वनस्पतिको घरेलुकरण गरेका होइनौँ, वनस्पतिले हामीलाई घरेलुकरण गरेको हो ।
किनकि त्योभन्दा हामी घुमन्ते जिन्दगी बिताउँथ्यौँ । बसाइ सरिराख्ने, शिकार गर्ने र जङ्गली वनस्पति र कन्दमूल खोज्ने । अंग्रेजीमा भन्दा हामी ‘हन्टर ग्यादरर’ थियौँ ।
जहिलेदेखि हामी वनस्पतिको खेती र जनावरहरू पाल्न थाल्यौँ, त्यही बेलादेखि बस्ती बसाल्न थाल्यौँ । अनि घुमन्ते जिन्दगीको अन्त्य भयो ।
घुमन्ते हुँदा मानिस करिब १५० देखि २०० जनासम्मको समूहमा बस्थे । यसो गर्दा जनावरसँग नियमित सन्सर्ग कम हुने भयो । जनावरबाट किटाणु सर्ने सम्भावना पनि कम थियो । सरिहाले पनि त्यसले महामारीको रूप लिने सम्भावना कम थियो । किनकि एक मानव समूह अर्को मानव समूहसँग विरलै सम्पर्कमा आउँथे ।
जब शहरीकरण बढ्यो, महामारीले भयानक रूप लिन थाल्यो । अहिले चर्चा छ, के कोरोना भाइरस भूमण्डलीकरणको उपज हो ?
महामारी त भूमण्डलीकरणभन्दा पहिले पनि हुन्थ्यो, तर विकराल रूप लिन वर्षौं, अझ भनौँ पुस्तौँ लाग्थ्यो । तर, अहिले संसारभर फैलिन नै केही महिना नै काफी भएको छ ।
यसको कारण भूमण्डलीकरण नभए पनि शहरीकरण चाहिँ पक्कै हो । किनकि शहरमा मानिसबीचको शारीरिक दूरी कायम राख्न धेरै गाह्रो छ । त्यसैले अचेल हामी लकडाउनमा छौँ । १० हजार वर्षअघि भाइरसको चेन १५० जना पार गरेपछि टुट्दथ्यो ।
विगत केही दशकमा हामीले गरेको प्रगति हाे आयुको लम्बाइ । प्राग ऐतिहासिक मानिसको सरदर आयु ४० वर्षको हुन्थ्यो । अहिले हाम्रो सरदर आयु ७० वर्ष पार छ ।
यो संख्यात्मक वृद्धि पक्कै हो । तर, मानिसले बाँच्नुपर्ने उमेर कति हो ? ४०, ५०, ७०, ८० वर्ष ? तपाईंले जुन चुन्नुहुन्छ, त्यसको कुनै वैज्ञानिक वा सामाजिक आधार छ ?
उमेर बढेसँगै के हाम्रो जीवनको गुणात्मक वृद्धि पनि भएको छ ? के उमेर ढल्केसँगै बढी मानिस खुसी छन् ? के हामी पहिलेभन्दा खुसी छौँ ? वा स्वस्थ छौँ ?
यसको त अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । जुन हिसाबले बढ्दो उमेरसँगसँगै डिमेन्सिया र क्यान्सरको बिरामी बढ्दै छन्, त्यसले हाम्रो जीवनको गुणस्तरतर्फ संकेत गर्छ ।
मुटुको रोग दुनियाँको एक नम्बरको ‘जानलेवा’ हो । मानसिक रोगीको उल्लेख्य रूपमा वृद्धि नभए पनि, विकासशील देशहरूमा रोगप्रति सचेतना बढेसँगै यसमा पनि वृद्धि हुने नै देखिन्छ ।
मानसिक रोगका लागि बन्ने औषधिको खपत धनी देशमा हरेक वर्ष बढ्दो छ । जंगलमा हुँदा वनको बाघले खाला भन्ने चिन्ता थियो । अचेल मनको बाघले बढी खान्छ मानिसलाई । डर सबैभन्दा बढी अध्ययन गरिने संवेग हो । खुसीको विषयमा खासै अध्ययन हुँदैन । औषधि बनाउने कम्पनीका लागि डर ८० अर्ब डलरको व्यापार हो ।
धेरैलाई इन्टरनेटले सामाजिक जीवनलाई समृद्ध बनाएको जस्तो लाग्छ । केही अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि तपाईंको फेसबुकमा चाहे १ हजार साथी हुन् वा ५ हजार, तपाईंले घनीभूत अन्तर्क्रिया गर्नेको संख्या १५० वा त्योभन्दा कम नै हुन्छ ।
यो १५० त्यही संख्या हो, जसमा हामी परापूर्वकालमा रमाउँथ्यौँ । १५० देखि २०० भन्दा माथिको संख्यालाई जोडिराख्न हामीलाई कथाको आवश्यकता पर्छ ।
राजनीति, राज्य, धर्म, लोकतन्त्र, कम्पनी, भूमण्डलीकरण आदि सबै त्यही मानवीय समस्याबाट उब्जेका कथा हुन् । गाडी, हवाईजहाज, पानीजहाज, रेल सबै कुनै न कुनै रूपमा शहरीकरण र भूमण्डलीकरणले पेस गरेका चुनौतीको समाधानको रूपमा आएका हुन् ।
त्यसो भए के अब हामी फेरि त्यही घुमन्ते युगमा फर्कन सक्छौँ त ? कदापि सक्दैनौँ । करिब ८ अर्ब जनसंख्या र त्यसको असीमित चाहनालाई अब ढुङ्गे युगले धान्न सक्दैन ।
वर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था धान्न हरेक वर्ष कमसेकम ३ प्रतिशतले वृद्धि हुनैपर्छ । यसको मतलब हो, अहिलेको भन्दा बढी उत्पादन वा अहिलेको भन्दा बढी उपभोग ।
कोरोना कोषको पैसा हाम्लाई बाँड्न भन्दिनु ल
छैनन् मर्दाका मलामी, छन् लास तर सुनसान छ आर्यघाट
यो उत्पादन वा उपभोग रोक्न खोजे अधिकांश मानिस या त कङ्गाल हुनेछन् या त बेरोजगार । तर, यही दरमा वृद्धि गरिराख्ने हो भने वातावरणीय विनाश निरन्तर रूपमा भइरहनेछ ।
हामीले फेरि कोरोनाजस्ता वा त्योभन्दा खतरनाक किटाणुको फेलापर्नु पर्नेछ । हामी आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय विनाशको दुश्चक्रमा फसिसकेका छौँ र यसबाट सजिलै उन्मुक्ति मिल्ने पनि देखिँदैन ।
ढिलो चाँडो यो कोरोना प्रकोपको अन्त्य हुनेछ । त्यसको केही दिनपछि हामी माता प्रकृति र पिता आकाशको कुरा गर्न छोड्नेछौँ । चराचुरूङ्गीको कुरा गर्न छोड्नेछौँ । हामी कोरोनालाई पनि बिर्सनेछौँ । जसरी हामीले १७ तलामाथि बसेर भूकम्पलाई बिर्सिसकेका छौँ ।
त्यसपछि अहिले थन्किएका बाइक, गाडी, पानीजहाज, हवाईजहाज, रेल पहिलेको भन्दा तीव्र गतिमा भाग्नेछन् । किनकि हामीलाई त कतै पुग्नु थियो, कोरोनाले यात्रा बीचमा रोकिदियो । तर, कहाँ पुग्नु छ ? कसैलाई थाहा छैन । हामी जीवनको ‘ट्रेड मिल’ मा दौडिरहेका छौँ । त्यसको गति दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । ‘ट्रेड मिल’ को गतिसँगै नदौडी हामीलाई सुखै छैन ।
होइन भने हामी भुइँमा लड्नेछाैँ । तर, ‘ट्रेड मिल’मा जति दौडिए पनि पुगिने त कतै पनि होइन । तर पनि आफू उभिएको स्थानमा अडिइरहन पनि दौडनु जरूरी छ ।
यो दौडलाई कम गर्ने, बेलाबेला विश्राम गर्ने कुनै उपाय अवश्य छ । त्यसका लागि हामीले आफ्ना मूल्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । आफ्ना प्राथमिकतालाई पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ ।
जुन प्राथमिकता हामीले भौतिक विकास र भौतिक सम्पन्नतालाई दिइरहेका छौँ, त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । जबसम्म हामीले धेरै सामान, धन, ठूला गाडी, ठूलो घर र अनियन्त्रित उन्मादलाई जीवनको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति मान्नेछौँ, त्यसबेलासम्म सार्थक प्रगति सम्भव छैन ।
सामान, धन, गाडी र घर, साधन हुन साध्य होइनन् । साध्य त खुसी हो । स्वस्थ रहनु हो । अरूलाई पनि राख्नु हो । यो प्राप्तिका लागि धेरै सामान, धन, ठूलो गाडी यो घरको आवश्यकता पर्दैन ।
जबसम्म हामी साध्यलाई होइन, साधनलाई आफ्नो जीवनको केन्द्रमा राख्छौँ, त्यतिबेलासम्म हामीले गन्तव्यहीन दौडमा भाग लिइराख्नु पर्नेछ । वातावरणको विनाश यसरी नै भइरहने छ । भाइरसले हामीलाई हरेक वर्ष लकडाउन गराइरहनेछ ।
फेरि एक पटक त्यही प्रश्न, के मानवले साँच्चिकै प्रगति गरेको हो ? या आफैँले सिर्जित गरेका समस्याको समाधान मात्र गरेको हो ? यो अघि बढेको हो वा उही ठाउँमा दौडिरहेको हो ? उत्तर भविष्यले नै देला । आशा छ , उत्तर मानव स्वयमले पाउनेछ ।
महावीर पुनको प्रश्न: विद्वानहरू अहिलेसम्म के हेरेर बसेका छन् ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १४, २०७६, १४:३६:००
दर्शन छाँट्ने होइन, सचेत र सतर्क रहने बेला हो
मिडिया समाजको ऐना कि मालिकको क्यामेरा ?
जीवनका परम सत्यः जन्म, मृत्यु र विज्ञापन
बाबु, तिमी कहाँ छौ ?